. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: October 2010
အခုတလော စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖြစ်နေပါတယ် .. ပြောရရင် စာအုပ်တွေနဲ့ ဝေးနေတာလည်း ကြာနေပါပြီ .. ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာမှ သူငယ်ချင်းကောင်းမှုနဲ့ စာအုပ်ပြန်ဖတ်ဖြစ်သလို စီးတီးဟောက ဓမ္မပန်းခင်း စာကြည့်တိုက်မှာလဲ မန်ဘာဝင်ဖြစ်လိုက်ပါတယ် .. အဲဒီအတွက် စာအုပ်ငှားပြီး ခုရက်ပိုင်း ဖတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ ..
စာအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် ရန်ကုန်မှာတော့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပါပဲ .. အပြင်မှာ သွားငှားဖတ်ရင် ဖတ် .. အိမ်မှာတွေ့တဲ့စာအုပ် ဖတ်ရင် ဖတ် .. ဒီလိုနဲ့ စာဖတ်ခြင်းက ကိုယ့်အတွက် မစိမ်းနေပါဘူး .. ဒီရောက်ပြီးတော့ အီးဘွတ်တွေလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် အပျော်ဖတ်တွေက များပါတယ် .. အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြပြီး စာ,အလေးတွေ မဖတ်မိဘူးပေါ့ .. ခုတော့ စာတွေ ပြန်လိုက်ဖတ်နေပါပြီ .. စာတွေထဲက အသိအမြင်တွေ လေးနက်လာဖို့ ကြိုးစားမိအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ပေါ့ .. ပေါ့ပေါ့လေး နေနေတယ်လို့လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် သုံးသပ်မိနေပါတယ် ..
ကိုယ့်အသက် ၁၈ နှစ်လောက်က စပြီး ဆရာတော် ဦးဇောတိက စာအုပ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးလာခဲ့ပါတယ် .. ဒါကလည်း ဘုရားစင်အောက်က ဗီဒိုကို အခွေရှာရင်း စမွှေမိတာက စတာပါပဲ ..
အရင် ဖေကြီး သင်္ဘောလိုက်တုန်းက မေကြီး ပို့ပို့ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာ ဆရာတော် ဦးဇောတိကစာအုပ်တွေ များပါတယ် .. တခါတလေ ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ ဖတ် .. တခါတလေ စိတ်မကြည် စိတ်ညစ်နေလို့ ဖတ် .. အဲလိုနဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးလာခဲ့ပါတယ် .. ဆရာတော်ရေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက လူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်ပြီး ဖတ်ရတာ လေးပင်မနေပါဘူး .. နားလည်လွယ်ပါတယ် .. တခါတလေ စိတ်မတည်ငြိမ် စိတ်အလိုမကျတွေများလာရင် ဆရာတော်စာအုပ်တွေဖတ်ရင်းနဲ့ပဲ စိတ်ထားတတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ် .. ဒီလိုနဲ့ လူတွေနဲ့ သဟဇာတဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မြင်မိပါတယ် .. ပြီးတော့ မကောင်းတာ ကောင်းတာ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း နားလည် လက်ခံလာနိုင်ခဲ့ပါတယ် ..
လူတိုင်း စိတ်ဓါတ်ကျဘူးမှာပါ .. စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့အခါ နည်းမျိုးစုံနဲ့ စိတ်သက်သာဖို့လည်း ကြိုးစားဘူးကြမှာပါ .. ဘယ်လိုနည်းမျိုးနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျတာ စိတ်ညစ်တာဟာ ပျောက်ကွယ်လျော့ပါးသွားမလဲ .. ???
ကိုယ်တိုင်လဲ စိတ်ဓါတ် ခဏခဏ ကျလို့ ခဏခဏကိုပဲ ပြန်ပြန်ကောက်တင်ရပါတယ် .. :D နည်းမျိုးစုံပေါ့ .. တခါတလေ စိတ်ထင်တိုင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်သွား .. တခါတလေ သီချင်းတွေနားထောင် ရုပ်ရှင်တွေကြည့် .. ဒါပေမယ့် ဒါတွေက ခဏပဲ စိတ်သက်သာသွားစေပါတယ် .. တကယ်တမ်း စိတ်ထားတတ်ဖို့ စိတ်ကိုပြင်ဖို့ကတော့ စာတွေဖတ်မှ ရပါတယ် .. အဓိက စိတ်ညစ်တဲ့အချိန် စိတ်ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့ အချိန် ဖတ်မိတာကတော့ ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ စာအုပ်တွေပဲများပါတယ် .. ခလုတ်ထိမှ အမိတ ဆိုသလိုပေါ့ .. စိတ်ညစ်တော့မှ ဘုရား တရား သတိရတတ်တာပါ .. ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ မေ့မေ့နေတတ်ပါသေးတယ် ..
ခုရက်ပိုင်း ဖတ်ဖြစ်တာတော့ ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ "အသက်ရှင်လျက် ဘ၀သေနေသူ" စာအုပ်ပါ .. အောက်မှာ စာမြည်း ပေးထားပါတယ် ..း) ကိုယ်တိုင်ကတော့ မီးဝေးချိတ်ဆိုသလို စာအုပ်တွေနဲ့ ဝေးရင် ပြန်ပြန်မိုက်ချင်နေပါသေးတယ် .. (ခု လိမ်မာနေတယ်လို့လည်း မဆိုလိုပါဘူး :D) တတ်နိုင်သလောက်တော့ လိမ်မာဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ် ..း)
အသက် မသေခင်မှာ ဘ၀သေသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို အရင်တုန်းက မတွေးမိဘူး။ အခု ဘုန်းကြီး သတိထားပြီး ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဘ၀သေနေသူတွေ တော်တော်များကြတာကို တွေ့ရတယ်။ တချို့တော့ ဘ၀သေနေတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပေမယ့် ဘ၀မကျန်းမာလို့ ထိထိရောက်ရောက် ဘာမှ မလုပ်နိုင်တာကို တွေ့ရတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာဖို့ အရေးကြီးသလို စိတ်ကျန်းမာဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဘ၀ကျန်းမာဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကြီး တစ်ခုလုံး ကျန်းမာဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အားလုံးဟာ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
အသက်ရှင်နေသေးသ၍ ဘ၀မသေအောင် နေနည်းကို သေသေချာချာ လေ့လာဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးက လမ်းစပဲ ဖော်ပေးလိုက်တာပါ။ ဆက်ပြီး ကိုယ့်ဥာဏ်နဲ့ကိုယ် ကိုယ့်အတွက် အဆင်အပြေဆုံး ဖြစ်အောင် ကိုယ့်ဘ၀ကို ပုံဖော်ပါ။ ဘ၀နေနည်းဆိုတာ ပုံသေနည်း မရှိပါဘူး။ အခြေအနေတွေဟာ အမြဲပြောင်းလဲနေသလို လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံ စဉ်းစားပုံတွေကို အမြဲပြောင်းနေရမယ်။ ဘ၀ကို ပုံသေနည်းနဲ့ နေရင် ဘ၀သေသွားမယ်။
ခံယူချက်မရှိတဲ့ဘ၀ဟာ အသက်ဝင်တဲ့ဘ၀ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ခံယူချက်မရှိရင် ဘ၀မရှိဘူး။ ခံယူချက် မခိုင်မာရင် ဘ၀မခိုင်မာဘူး။ ခံယူချက် မရေရာရင် ဘ၀ မရေရာဘူး။ ကိုယ့်ခံယူချက် မရေရာရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုလူလို့ ပြောမလဲ။ ပြောစရာမရှိဘူး။ ငါ ဘယ်လိုလူလဲ။ ငါ ဘယ်လိုလူဖြစ်ချင်သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ ဘ၀ကို ပီပီပြင်ပြင် အသက်ဝင်အောင် နေချင်တဲ့သူတိုင်း အမြဲမေးနေရမယ့် မေးခွန်း ဖြစ်တယ်။
ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ အကျိုးရှိရဲ့လားလို့ မမေးတဲ့သူဟာ သူ့ဘ၀ကို အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင် နေလို့ ရနိုင်မလား။ တိရစ္ဆာန်တွေဟာ အကျိုးရှိရဲ့လားလို့ မေးနိုင်တဲ့ ဥာဏ် မရှိဘူး။ လူသာလျှင် အကျိုးရှိရဲ့လားလို့ မေးနိုင်တယ်။ ဒါဟာ လူရဲ့ ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်မြင်တဲ့ဘ၀ကို တကယ်နေချင်ရင် ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ ဘာအဓိပ္ပါယ်ရှိသလဲ၊ အကျိုးရှိရဲ့လား၊ ဘယ်လောက် အကျိုးရှိသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေးရမယ်။
လူဟာ တော်တော်ကို မေ့တတ်ပါတယ်။ သိပြီးသားပေမယ့် မေ့နေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ် မကြာခဏ သတိပေးရမယ်။ ဒီလို သတိပေးဖို့ပဲ စာကောင်း ပေကောင်းတွေကို ဖတ်ရတယ်။ ဘုန်းကြီးလည်း မနက်တိုင်း စာကောင်း တခုခုကို ဖတ်တယ်။ ကောင်းတဲ့ အတွေး ကောင်းတဲ့ သဘောထား ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ တနေ့တာကို စ,ဖို့ လိုတယ်။
ပညာသင်တာ ဘ၀ကို အကောင်းဆု့းနေနည်းကို ရှာတာ။ ဘွဲ့ လက်မှတ်တခု အောင်လက်မှတ်တခု ရဖို့လောက် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပညာသင်တာဟာ အင်မတန် အဆင့်နိမ့်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေဖို့၊ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေဖို့၊ စိတ်ကျန်းမာရေး ကောင်းဖို့၊ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး ကောင်းဖို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး အရည်အချင်းတွေကို အဆင့်မြင့်ဆုံးရောက်အောင် လုပ်ဖို့၊ ဘ၀ရဲ့ လေးနက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှာဖို့၊ အကောင်းအဆိုး အမှားအမှန်ကို ကိုယ့်ဥာဏ်နဲ့ကိုယ် ပိုင်းခြားပြီး သိနိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ အားလုံး ပါရမယ်။
ကိုယ့်ဘ၀မှာ အဆင်ပြေအောင် နေချင်တဲ့သူအတွက် သိရမယ့် အချက်တွေဟာ သိပ်မများပါဘူး။ နားလည်ဖို့လည်း မခက်ပါဘူး။ လုပ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ မလုပ်နိုင်တာလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ် မေးပါ။ မေးပြီးရင် ရိုးရိုးသားသားဖြေပါ။
လူအထင်ကြိးတာ ခံရဖို့ ပစ္စည်းဥစ္စာ ချမ်းသာဖို့လောက် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အပေါ်ယံလေး ရှပ်ပြီးတော့ ဘ၀ကို နေသွားရင် တနေ့မှာ ဘ၀ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့ စိတ်ရောဂါကို ခံစားရလိမ့်မယ်။ ဘ၀မှာ သူ့သဘာဝ သူ့နိယာမဆိုတာ ရှိပါတယ်။ မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ အသိဥာဏ်ကို မရရင် တကယ် ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ ဘ၀ကို ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အသက်ဝင်နေတဲ့၊ ဘ၀ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဘ၀၊ ပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀ကို ရအောင် လုပ်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ပါစေ။
ဆရာတော် ဦးဇောတိက (မဟာမြိုင် တောရ)
အသက်ရှင်နေလျက် ဘ၀သေနေသူ စာအုပ်မှ ဒါနပြုပါသည်။
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/28/2010 11:39:00 PM 14 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ ကျမနှင့်, မျှဝေခြင်း
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/24/2010 12:27:00 AM7comments:
ကျမတွေ့ဘူး သိဘူးသမျှ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ အရိုးစွဲနေတဲ့ အကျင့်လေးတွေ အစွဲအလန်းလေးတွေ တော်တော်များပါတယ် ..
ဥပမာ - ငယ်ငယ်တုန်းက ကျမ မေကြီးဖက်က အဖွားတို့ အဒေါ်တို့ဆိုရင် သေစကားပြောတာတို့ အပျက်စကားပြောတာတို့ကို မကြိုက်ပဲ ရှောင်ကြပါတယ် .. တခါတလေ ကျမက လမ်းသွားရင်း သေသွားရင်ဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောမိလိုက်တာနဲ့ စကားနောက် တရားပါတယ် မပြောရဘူးလို့ ပြောတတ်ကြတယ် .. ငယ်ငယ်ကတော့ ကြောက်တယ်လေ .. အဲလိုပြောကြတော့ နောက် မပြောရဲဘူးပေါ့ .. ပြီးတော့ ဘယ်က ဘယ်လို စကားတွေ လက်ဆင့်ကမ်းလာတယ်တော့ မသိပါဘူး .. အသုဘအိမ်ရှေ့မဖြတ်ရဘူး တို့ .. သချို င်္င်းကုန်း လက်ညှိုးမထိုးရဘူး အကယ်၍ ထိုးမိရင် လက်ညှိုးကို ၇နှစ်ချက် အသက်အောင့် ကိုက်ရတယ်ဆိုတာတွေ အများကြီး အများကြီးပါပဲ .. အဲဒီအချိန်က မစဉ်းစားတတ်သေးပဲ သူများပြောသမျှ လိုက်လုပ်လိုက်တာပါပဲ ..
ခုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ တထွာ တမိုက် ဥာဏ်လေးနဲ့ စဉ်းစားတတ်သလောက် မှတ်ထားသလောက်နဲ့ လုပ်သင့်တယ်ထင်ရင် ကိုယ်ပိုင် အတွေးနဲ့ လုပ်လိုက် မလုပ်သင့်တာလို့ ကိုယ့်ဦးနှောက်က ဆုံးဖြတ်ပေးရင် မလုပ်လိုက်နဲ့ ကိစ္စတော်တော်များများကိုယ် စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျမတွေးမိတယ် .. ငယ်ငယ်က တချို့ကိစ္စတွေက တော်တော်ရယ်စရာကောင်းပါလားပေါ့ .. ဒါဆို ခု ကိုယ်ကရယ်စရာတွေ မလုပ်မိတော့ဘူးလား .. ???? .. သိပ်တော့ မထင်သေးဘူး .. မတူညီတဲ့ကိစ္စတွေ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ တချိန်ကျ ရယ်စရာ ကောင်းနေလိမ့်ဦးမယ် ..
ဒီလိုပါပဲ အသိဥာဏ် နုံနဲ့စဉ်က ကိုယ့်စိတ်ကို လေးလံစေတဲ့ အရာတွေဟာ ခုချိန်မှာ ဘာမှ မဟုတ်တော့သလို ..
ခုချိန် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို ပင်ပန်းစေတဲ့ အရာတွေဟာလည်း နောင် အချိန်ကာလတခုမှာ "ငါဟာ အဲဒီအချိန်က တော်တော် ရယ်စရာကောင်းခဲ့ပါလား" လို့ တွေးမိစေလိမ့်ဦးမယ် ..
တကယ် ပို့စ် စရေးတုန်းက ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ လမ်းလွဲနေပါပြီ .. :D ကျမ တကယ်ရေးတုန်းက အစွဲအလန်းအကြောင်း .. ဥပါဒ်ဒဏ်ကြောင့် ဥပါဒ်ရောက်တတ်တဲ့ အကြောင်းပါ .. :D ခုတော့ လွဲနေပြီ ..
ကျမတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက အစွဲအလန်း ရိုးရာဆိုတာတွေကို အစွန်းရောက်လေ့ ရှိကြတယ် .. တသက်လုံး ယဉ်ပါးလာတဲ့ အရာတွေမို့ ပစ်ဖို့ ခဲယဉ်းတာလည်း ပါပါလိမ့်မယ် ..
ဒီ အရှေ့က ပို့စ်မှာ ကျမအတွက် အချိန် သိပ်မကျန်တော့ဘူးလို့ ရေးခဲ့တယ် .. ဒီလိုရေးတာသာ အဖွားတို့ ရှိနေသေးလို့ သိရင် နိမိတ်မရှိတာ နိမိတ်မကောင်းတာတွေ ရေးတယ်ပြောတယ်လို့ ဆုံးမကြဦးမယ် ထင်ပါတယ် ..း)
အချိန်တွေ တရွေ့ရွေ့ ကုန်နေပါတယ် .. နေ့ရက်တွေလည်း တရက်ပြီး တရက် ကုန်ကုန်လာနေပါတယ် .. ကုန်နေသမျှ အချိန် နေ့ရက်တိုင်းက သေဖို့ တရွေ့ရွေ့ နီးနီးသွားတာပါပဲ .. တခါတခါ တယောက်တည်း ရှိနေချိန်ဆို အတွေးတွေ သိပ်များတတ်ပါတယ် .. ကိုယ်တိုင်နဲ့ လူတွေရဲ့ အကြောင်း စိတ်ဓါတ်တွေ အကြောင်း လုပ်ရပ်တွေ အကြောင်း .. ကြီးကျယ်တယ်တော့ မထင်ပါနဲ့ .. :D
သေတယ်ဆိုတာက တော်တော် ကြောက်စရာကောင်းမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်သလို တော်တော်လည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ် .. ဘယ်လို ပုံစံ သေမလဲ .. ဘယ်လိုအချိန် သေမလဲ မသေချာပေမယ့် သေမှာတော့လည်း သေချာနေပြန်ပါတယ် ..
ခုချိန်ထက် ပိုကောင်းသော အချိန် မရှိ တဲ့ .. ခု လက်ရှိရနေတဲ့အချိန်က အကောင်းဆုံးပါပဲ .. ကျမတို့ ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ ..
ရန်လိုမှုတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းမလား .. နားလည်မှုတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းမလား .. ??
ငိုကြွေးခြင်းတွေ နောင်တတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းမလား .. ပျော်ရွှင်မှုတွေ ကူညီမှုတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းမလား .. ??
အားလုံးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုသာပါပဲ ..း)
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/17/2010 11:42:00 PM 8 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ ခံစားချက်, ဟိုရောက် ဒီရောက်, အတွေး စိတ်ကူး, ဆောင်းပါး
ကျမမှာ အချိန် သိပ်မကျန်တော့ဘူး ..
အကယ်၍များပေါ့ .. ခုခေတ် လူတွေရဲ့ သက်တမ်းနဲ့တွက်လို့ ကျမက သက်တမ်းစေ့ နေရမယ့် သူတယောက်သာဖြစ်ခဲ့ရင် .. ကျမအတွက် နောက်နှစ်ပေါင်း ၄၅ နှစ်လောက်ပဲ အချိန်ရှိတော့မယ် .. ခုတောင် ကိုယ့် အသက်ကို ပြန်ရေတွက် ကြည့်မိတော့ ၂၆ ထဲမှာ .. ကျန်ခဲ့တဲ့ ၂၅နှစ် ကိုတောင်ဘယ်လိုကျော်လာမှန်း မသိတာ နောက် ၄၅ ဆိုတာလည်း သိပ်မကြာပဲ ကုန်ဆုံး သွားနိုင်ပါတယ် .. ၄၅နှစ် ထဲမှာမှ အိပ်ချိန်တွေကို နှုတ်လိုက်ဦး ကျန် သက်တမ်းရဲ့ ၃ပုံ ၂ပုံလောက်ပဲ ကျမ မျက်လုံးတွေ ပွင့်နေပါလိမ့်မယ် ..
အကယ်၍များပေါ့ .. ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစာတွေဆို မကြိုက် အသီးအရွက် အစားနဲတဲ့ ကျမအတွက် ရောဂါဘယတွေက ခန္ဓာထဲမှာ ရှိနေနိုင်ပါတယ် .. နဲနဲချင်း စုစုထားတဲ့ ရောဂါသေးသေးမွှားမွှားလေးတွေကနေ တဖြည်းဖြည်း ရောဂါကြီး ဖြစ်လာမယ့် နောက် နှစ်ပေါင်း ၂၀ .. ကျမရဲ့ သက်တမ်းက နောက်ထပ် နှစ်၂၀ ဆိုတာ အများကြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ .. ဒါကြောင့် ကျမမှာ အချိန် သိပ်မကျန်တော့ဘူးလို့ ပြောတာပေါ့ ..
အကယ်၍များပေါ့ .. ခုချိန်မှာ ကျမ ကိုယ်ထဲ ရောဂါက ရှိနေပြီ မသိသေးတာသာ ရှိတယ် .. အဲဒီရောဂါကြောင့် နောက်ထပ် အချိန် ၁၀ နှစ်ဆိုတဲ့ သက်တမ်းပဲ ကျမမှာ ရှိတော့မယ်ဆိုရင် .. လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန် ၁၀နှစ်ကို ပြန်စဉ်းစားတော့ အသက်က ၁၅နှစ် ၁၆နှစ် အထက်တန်းကျောင်းတက် ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်ထပ်တက် ဟိုအလုပ်ဝင် ဒီအလုပ်ဝင်နဲ့ ခု ၂၅ ၂၆ကို ချက်ချင်းပဲ ရောက်လာသလို .. တကယ်တန်းဖြတ်သန်းခဲ့တာတော့ ၁၀နှစ်ပါပဲ .. ဒါပေမယ့် ပြန်တွေးကြည့်တော့ မဝေးသလို .. ဒီလိုပဲ နောက် လာမယ့် ၁၀ .. တကယ်ပဲ ကျမမှာ အချိန် သိပ်မကျန်တော့ပါဘူး ..
အကယ်၍များပေါ့ .. ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးကြည့်လိုက်လို့ ကျမမှာ ၆လ ၁နှစ်လောက်သာ နေရတော့မယ့် ရောဂါသာရနေခဲ့ရင် .. ကျမ လုပ်ချင်တဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် အချိန်မှ မှီပါ့မလား .. တကယ်သာ အဲလို အခြေအနေရောက်သွားရင် ကျမ အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒက ဘာများ ဖြစ်နေမလဲ .. စလုံးမှာနေပြီး ၂နှစ် ၁ခါ ပတ်စ်တိုးတဲ့အခါ အချိန်တွေ သိပ်မြန်နေသလို .. နှစ်တိုင်း လုပ်နေကျ နေရှင်နယ်ဒေးက ခဏလေး ပြန်ရောက်ရောက်လာသလို .. တရုတ်နှစ်ကူးက ခပ်မြန်မြန် တပတ် ပြန်ပြန်လည်လာသလို ..
အကယ်၍များပေါ့ .. မနက်ဖြန် ကျမ အက်ဆီးဒန့် တခုခုနဲ့ ..
အကယ်၍များပေါ့ .. ခု ချက်ချင်း လက်ငင်း အက်ဆီးဒန့် တခုခုနဲ့ ..
တကယ်ကိုပဲ ကျမမှာ အချိန် သိပ်မကျန်တော့ဘူး ..
ကုန်သွားခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ ခဏပြန်တွေးကြည့်တော့ မနေ့ တနေ့ကလို .. တကယ်တမ်း ရက် လ နှစ်တွေကို လက်ချိုး ရေတွက်ကြည့်တော့ များပြားလွန်းသလို .. ခု နောက်တနေ့ နောက်လ နောက်နှစ်တွေဆိုတာလည်း တရွေ့ရွေ့ ကုန်ဆုံးပြန်ပါဦးမယ် ..
တချို့အရာတွေက တဖြည်းဖြည်း နီးနီးလာတယ် .. တချို့အရာတွေကတော့ ဝေးဝေးသွားလိုက်တာ ..
(ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူး .. ရောက်ရာပေါက်ရာ စိတ်ကူးပေါက်ရာ ရေးချလိုက်မိတာပါပဲ ..း))
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/07/2010 05:00:00 PM 13 comments: